Global Voices teny Malagasy » Puerto Rico: Kiaka manohitra herisetra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Novambra 2009 8:36 GMT 1	 · Mpanoratra Firuzeh Shokooh Valle Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Pôrtô Rikô (Etazonia), Hafanàm-po nomerika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Mitana toerana be lavitra noho ny isa fotsiny izy ireo. Izy ireo dia endrika, fiainana, nofinofy ary fanantenana. Izy ireo dia reny, zanaka vavy, anabavy, renibe, nenitoa, zanaky ny mpiray tampo, namana, mpiasa, mpanao politika, mpisolo vava, mpikambana amin'ny akademia, mpitolona, mpianatra, ireo olon-droa manaraka ny fitsipiky ny natiora na ireo mitovy nefa mifanambady [straight, gay]. Ny herisetra dia mamakivaky tsy ankifidy sarangam-piarahamonina , volonkoditra, foko, sisintany, lahy na vavy, ary firehana manokana momba ny filàna ara-nofo.
Ao Puerto Rico, araka ny tatitra ofisialy nangonin'ny Birao mpiaro ny vehivavy , dia vehivavy 178 no novonoin'ireo olona niaraka niaina taminy teo anelanelan'ny 2001 sy 2008. Tamin'ity taona ity, efa vehivavy 16  sahady no maty noho ny herisetra an-tokantrano tao amina nosy kely ahitàna olona eo amin'ny 4 tapitrisa eo ho eo. Ny salanisan'ny tranga-na herisetra an-tokantrano notaterin'ny mpitandro filaminana dia 20,000 isan-taona. Sasantsasany amin'ireny ihany no naharaisana tatitra. Tamin'ny fanadihadian'izy ireo farany (2007), ny Foibe natokana ho an'ireo Niharan'ny Fanolanana  najoron'ny governemanta dia nikajy fa olona 18,000, vehivavy sy ankizivavy ny ankamaroany, no tratry ny herisetry ny filan'ny nofo isan-taona.
Maro ary amin'ny endrika samihafa no isehoan'ny herisetra, tsy fitovian'ny fahafahana mahazo fikarakarana ara-pahasalamana sy fanabeazana, ny fankahalàna ary ny fanavakavaham-bolonkoditra.
Sary lehibe, Diabe ho fanoherana ny herisetra, tao amin'ny Anjerimanontolon'i Puerto Rico. Navoaka rehefa nahazoana alàlana tamin'ny mpikarakara.
Mbola misy maro ihany koa ny vehivavy , ny lehilahy, manohitra ny herisetra amin'ny fomba vaovao sy maro tsy tambo isaina. Androany, 25 Novambra, ao anatin'ny fankalazana ny Andro maneran-tany natao hamongorana ny herisetra atao amin'ny vehivavy , izay manamarika ihany koa ny andro voalohany maneran-tany amin'ny hetsika 16 andro hanoherana ny herisetra [16 Days of Activism Against Gender Violence] , dia vehivavy mpitoraka blaogy avy ao Puerto Rico no nanoratra lahatsoratra momba ny herisetra miantraika amin'ny fiainan'izy ireo, amin'ny fianakaviany ary amin'ny fiarahamonin-dry zareo.
Nanoratra tononkalo ry zareo, fanadihadiana lalina, sy fampieritreretana ihany koa. Nanoratra izy ireo momba ny herisetra ara-drafitra, amin'ny teny ifanaovana, ao an-tokantrano sy ny herisetra amin'ny fanolanana. Nanoratra izy ireo mikasika ny tsy fitoviana eo amin'ny lanjan'ny fifandraisana ankapobeny, ny politikan'ny mponina, ny lalàna, ny fahantrana, ny demaokrasia, ny toekarena, ary hatramin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy any anatin'ireny horonantsary ireny. ‘Ndao mba hojerentsika ny endrik'izy ireo, hovakiantsika ny lahatsorany, ary hohenointsika ny feony.
Ao amin'ny blaoginy Mujeres en Puerto Rico  [ES], Verónica, vehivavy mpisolo vava dia mahatsiaro ny vesatra nentin'ny herisetra nianjady tamin'ireo vehivavy nifanerasera taminy, na nalàna tanatin'izany, teo amin'ny fiainany manokana hatrany amin'ny fahazazàny:
Tany amin'ny fahatanorako, nandresy lahatra an-dreniko aho mba hahazo mandeha mikojakoja ny tanako amin'izay, sambako io. Vantany vao azo ny fahazoan-dàlana avy aminy, niolomay namonjy ny trano mpikojakoja hatsaran-tarehy aho, ary tany no nifankahalalako tamin'i Ada, tompon'ny toerana. Tsotra sy tsara fanahy izy. Sady nitsiky foana izy no nanohy miasa hatrany. Ny vadiny ihany no mpiara-miombon'antoka aminy amin'io asany io, tadidiko tsara koa izy mivoaka sy miditra ny efitrano mandritra ny fikarakaran'i Ada ny tanako. Indray andro, tampoka teo, nikatona ilay trano fikojakojana hatsaran-tarehy. Ho ahy, nisokatra ny boatin'i Pandora. Voalohany teo amin'ny fiainako no nahatsapako fa hoe mety hiafara amin'ny fahafatesana ny fitiavana lalina. Veriko ny maha-tsy manantsiny ahy.
Amárilis Pagán, vehivavy mafana fo, dia niampanga ao amin'ny Brujas y Rebeldes  [ES] ireo endrika maro isehoan'ny herisetra izay ny Fanjakana no tomponandraikitra amin'izany.
Manohitra ny rafitra iray an'ny governemanta izahay, izay lasa voalohany amin'ny fampiharana herisetra amin'ny vehivavy eto Puerto Rico. Manohitra izahay mba ho fiarovan-tenanay sy ireo tsy manan-kianteherana eo anivon'ny fiarahamonina. Toy ny amin'ny herisetra ao an-tokantrano ihany dia olana momba ny resaka fahefana sy fifehezana ihany koa ny olan'ny herisetra ataon'ny Fanjakana amin'ny vehivavy. Amin'io tranga io, izy dia voafaritry ny fomba fijery ny vehivavy, sy izay eritreretina fa tokony ho toeran'izy ireo araka ny foto-pinoana Judeo-Christian izay mahavonto ny governemanta. Amin'ity 25 Novambra ity, andro maneran-tany hamongorana ny herisetra atao amin'ny Vehivavy, tena ilaina mihitsy ny miresaka momba ny endrika rehetra sy ny halalin'ny fomba fanaovana herisetra amintsika. Io herisetra io tsy voafetra fotsiny hoe nataon'ireo olona akaiky indrindra antsika (herisetra an-tokantrano). Endrika maro samihafa no isehoan'ny herisetra eo amin'ny fiainan'ny vehivavy. Ny finoana fa hoe ny herisetra ao an-tokantrano ihany no hany karazana endrika herisetra mianjady amin'ny vehivavy dia toa fanatsotsorana ihany ny olana izay tena saro-bahana tokoa.
Performance hamotsipotsirana ny herisetra atao amin'ny vehivavy ao Puerto Rico. Video an'ny Insula TV.
Nahomi Galindo-Malavé, vehivavy mafana fo, dia manadihady lalina ny endrika marolafin'ny herisetra noho ny tsy fitoviana [of gender violence] ao amin'ny Poder, Cuerpo y Género  [ES]:
Nandritry ny iray volan'ny ‘Aoka izay ny herisetra atao amin'ny vehivavy’ [No More Violence Against Women] tsara ny mampahafantatra fa ny herisetra tsirairay dia mifanindran-dàlana amina tambajotra-na fahefana ara-pifandraisana. Amin'io tranga io, ireo fifandraisan'ny lahy sy ny vavy. Izany no mahatonga hoe ireo izay voakasika na “niharan'ny” herisetra noho ny tsy fitoviana dia tsy voatery ho vehivavy foana akory. Ohatra iray tsy ela akory ny herisetra namonoana an'i Jorge Steven López , 19 taona, lehilahy tia lehilahy. Mba hahafahana manakatra io vono-olona io ho toy ny habibiana nateraky ny fankahalana sy herisetra noho ny tsy fitoviana, ilaina dia ilaina tokoa ny mahafantatra hoe manao ahoana ny fahefana ara-pifandraisana ary ny fomba fiorenan'ny fahefan-dehilahy … Vokatry ny fahefana ara-pifandraisana ny herisetra atao amin'ny vehivavy ao amin'ny fiarahamonina misy antsika. Ankoatr'izay, endrika iray isehoan'ny herisetra noho ny tsy fitoviana ateraky ny zavatra azo takarina tsara izay mampihataka sy tsy mifanojo mihitsy amin'ny lamina maha-lahy na maha-vavy mipetraka. Ny heloka ao an-tokantrano, ara-toekarena, famonoana vehivavy sy ny fankahalàna dia endrika samihafa isehoan'ny herisetra noho ny tsy fitoviana daholo.
Ao amin'ny El rincón de la cinefilia  [ES], RDLC, izay mamariparitra ny tenany ihany ho lehilahy mpandala ny zon'ny vehivavy, dia mitondra tsikera momba ny horonantsary “What's Love Got to Do with It?” “Inona koa no hidiran'ny fitiavana amin'izay?”  sy ny “North Country” “Firenena Avaratra” . Mamintina izy fa:
Aretina ny herisetra atao amin'ny vehivavy, na izany any anatin'ny fiainan-tokantrano manokana na any anivon'ny toeram-piasàna. Te-hino izahay fa taorian'izay taona maro nanaovana fampahatsiarovan-tena izay, efa tokony ho fongotra io aretina io. Saingy, eto indrindra isika, anatin'ny taona 2009, ny antontan'isan'ny herisetra atao amin'ny vehivavy dia vao mainka nisondrotra be tsy araka ny niheverana azy. Izany indrindra no mahatonga ahy manolotra ireto video miainga avy amin'ny zava-marina ireto, ahitàna vehivavy, malaza na tsia, nandao ny toerana naha “mpizaka ankaso” [victims] azy ireo ho amin'ny toeran'ny Be herim-po. Hafatra mazava no ampitain'izy ireo: aoka izay ny herisetra atao amin'ny vehivavy. TEBOKA.
Mariana Iriarte, vehivavy mafana fo mpianatra lalàna dia miresaka momba ny herisetra atao amin'ny alalan'ny teny sy fihetsika ao amin'ny Con otro y otras en el mundo  [ES]:
Tena zava-dehibe, na izany aza, ny mahatsiaro saina sy misarika ny sain'ny vehivavy hafa ihany koa fa mazàna ny herisetra ara-batana dia ialohavan'ny herisetra amin'ny alalan'ny fihetsika. Fa alohan'ny haha-voadaroka na haha-voaolana anao mivantana mihitsy, dia efa nomanina miandalana teny ny kianja mba hahatonga anao ho toy ny voageja, tsy misy lalan-kivoahana intsony. Fa alohan'ny hipetahan'ny totohondriny dia ataony izay hiheveranao fa tsy isan'ny olona ianao, tsy misy lanjany, ary miankina aminy ny fiainanao, fananany ianao. Tsara ny hiaikena fa tsy araka ny tokony ho izy izany, ary ireo fepetra apetraka aminao ireo dia ny lehilahy no namorona azy mba ho antoka amin'ny fanandevozana ny vehivavy. Izany indrindra, ankehitriny, no itenenana hoe aoka izay ny herisetra atao amin'ny vehivavy ary sahia manangana [mamorona] indray ny maha-ianao anao vaovao araka izay tianao.
Ao amin'ny Poder, espacio y ambiente [ES] Erika Fontánez, mpandàla ny tontolo iainana sy vehivavy mpampianatra lalàna dia manadihady ireo endrika maro samihafa isehoan'ny herisetra avy amin'ny rafi-pitantanana atao amin'ny vahivavy:
Takianay ny handinihana ny herisetra: ny endrika herisetra rehetra mahazo ny vehivavy, mivantana na ankolaka, ny mivandravandra sy ny anaty rafitra. Takianay ny hanafoanana ny politika manome vahana ny fanilikilihana sy ny fampiharana herisetra: ny endrika herisetra rehetra. Tsy ampy ‘Ireo fampanantenan'ny lehilahy sy ny lokalokany’ (fanentanana iray nadika avy any ivelany napariaky ny governemanta ao Puerto Rico). Tsy ilainay ireny. Mila fitoviana eo amin'ny fahefana ara-pifandraisana izahay ary eo amin'ny tontolom-piainana. Avelao izahay hitaky fahefana ara-pifandraisana hafa kokoa mba handrodanana ny faribolan'ny herisetra. Atsaharo ny herisetra atao amin'ny vehivavy avy amin'ny rafi-pitantanana.
Ao amin'ny El diario de El Curio  [ES], Yolanda Velázquez dia nandefa tononkalo. Ny blaogin'ny fifanatonana Movimiento Amplio de Mujeres  [ES] dia manam-baovao momba ny hetsiky ny vehivavy tao Puerto Rico.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/11/29/4335/
 Birao mpiaro ny vehivavy: http://www.mujer.gobierno.pr/
 vehivavy 16: http://www.elnuevodia.com/mueremujeramanosdesuexpareja-640843.html
 Foibe natokana ho an'ireo Niharan'ny Fanolanana: http://www.salud.gov.pr/VictimasDeViolacionCAVV/Pages/default.aspx
 Andro maneran-tany natao hamongorana ny herisetra atao amin'ny vehivavy: http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-inter-day.htm#16
 16 andro hanoherana ny herisetra [16 Days of Activism Against Gender Violence]: http://www.saynotoviolence.org/around-world/news/16-days-activism-against-gender-violence
 “What's Love Got to Do with It?” “Inona koa no hidiran'ny fitiavana amin'izay?”: http://www.imdb.com/title/tt0108551/
 “North Country” “Firenena Avaratra”: http://northcountrymovie.warnerbros.com/